सन १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार ६० हजार वर्ग किमी जमिन भारतले फिर्ता गर्नै पर्छ ! से-यर गरौं – ईमेची डटकम
नेपाल टेलिभिजनमा गीत भिज्वलाइज हुँदा पनि त्यो चार पंक्ति थिएन । त्यसपछि उनले कान्तिपूर दैनिकमा यसविरुद्ध लेख नै लेखे । पछि त्यो पंक्ति थपिएर भिजुअल बनाइएको थियो । चर्चामा रहेको भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल जानेर या नजानेर चीन विरोधी मोर्चामा सामेल हुन गइरहेको कुरा एकदम प्रतिउत्पादक भएको उनले बताए । नेपाल सरकारले यसको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘हामी चीन, अमेरिका र भारतको त्रीकोणको संघर्षको मैदानमा किन मिसिने ? यो विषमा नेपल सरकार, नेपाली सेना र तमाम पार्टीहरुका् पनि ध्यान जानुपर्छ ।’